အာဏာရပါတီ (NLD) ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေ သဘောထား အလေးထားပါ့မလား? | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home ၂၀၂၀ ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အာဏာရပါတီ (NLD) ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေ သဘောထား အလေးထားပါ့မလား?
အာဏာရပါတီ (NLD) ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေ သဘောထား အလေးထားပါ့မလား?
● ဦးအောင်မျိုးဇော် (ဥက္ကဌ)
❖ MCN | DEBATE NIGHT အစီအစဉ်ကို ဩဂုတ်လ (၁) ရက် (စနေ) နေ့ ည (၉း၀၀) နာရီအချိန်မှာ MCN ရုပ်/သံ သတင်းဌာနရဲ့ Facebook Page ဖြစ်တဲ့ https://www.facebook.com/mcntv/live နဲ့အတူ Youtube ဗီဒီယိုကွန်ရက် https://www.youtube.com/mcntvnews တို့ကနေ တိုက်ရိုက် (Live) အနေနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleခိုးဝင်တဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေနဲ့ ထိုင်း ယာဉ်မောင်း အဖမ်းခံရ
Next articleအမေရိကန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု သာမန်ထက် လွန်ကဲနေ